UK oo cambaareysay xukun dil ah oo Somaliland fulisay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	UK oo cambaareysay xukun dil ah oo Somaliland fulisay
UK oo cambaareysay xukun dil ah oo Somaliland fulisay
Marwo Lizzie Walker oo ah Wakiilka dowladda Ingiriiska u joogta Somaliland, ayaa walaac xoogan waxaa ay kamuujisay, xukun dil ah oo Somaliland shalay ay ku fulisay, 4 askari oo horay u dilay askar kale.
Waxaa ay sheegtay in xukunka dilka ah uu yahay mid meel dhac ku ah qofka Bani’aadamka ah, isla markaana tallaabada ay qaaday Xukuumadda Somaliland ay aad uga soo horjeedaan.
“Waxa aad noo walaac galiyay qisaasta laga fuliyay Somaliland, halka ay UK ka taagantahay sifiican ayaa loo yaqaana: Waanu ka soo horjeednaa qisaasta oo dhan wakhti kasta iyo duruufkasta, ciqaabta dilku waa mid aan ku haboonayn sharafta aadanaha. Waxba kama tarto ka hortaga dembiyada” ayay tiri Walker.
Inta badan wadamada Reer Galbeedka ayaa aad uga qeylo dhaamiya markii Xukuumadda Somaliland ay xukuno dil ah ku fuliso qof dilay qof kale, iyaga oo aan ka hadlin xukunada dilka ah oo ay dhankeeda fuliso dowladda Fedraalka ah ee Soomaaliya.
UK oo cambaareysay xukun dil ah oo Somaliland fulisay was last modified: February 17th, 2022 by warsan radio
Shir laga yeeshay Amniga Magaalada Garoowe
Madaxweyne Qoorqoor “Cadawga meelaha uu naga heysto waa ka xoreyneynaa”